ဒီဇင်ဘာလ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဒီဇင်ဘာလ 2019
နေအိမ် > ဒီဇင်ဘာလ 2019
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဒီတစ်နှစ်ရဲ့အချိန်နီးလာပြီဆိုတာမင်းယုံနိုင်မလား? ဒါဟာဒီနှစ်အလှဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်! တကယ်ပဲဂျာမနီအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များနှင့်အတူဝိညာဉျတျောသို့အရငျ! နှောင်းပိုင်းတွင်နိုဝင်ဘာလကနေခရစ္စမတ်အကြိုသည်အထိ, town squares all over Germany are…